भुक देउरालीमा ४० रोपनी जग्गा उपलव्ध भए बौद्ध गुम्बा निर्माण गर्ने गुरु रिम्पोछेको प्रतिवद्धता ! – ebaglung.com
भुक देउरालीमा ४० रोपनी जग्गा उपलव्ध भए बौद्ध गुम्बा निर्माण गर्ने गुरु रिम्पोछेको प्रतिवद्धता !
२०७६ असार २७, शुक्रबार १९:१६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
पर्वत २०७६ असार २७ । बौद्ध धर्मका गुरु डिगु छोग्याल रिम्पोछेले पर्वतको मोदी गाउँपालिका १ भुक देउरालीमा बौद्ध गुम्बा निर्माणका लागि चासो देखाएका छन् । बौद्ध गुरु रिम्पोछेले गाउँमै पुगेर गुम्बा निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन । उनले गुम्बा निर्माणको लागि ३० रोपनी र आफ्नो निजी ध्यानकेन्द्र निर्माणको लागि १० रोपनी गरी ४० रोपनी जग्गा स्थानीयले उपलव्ध गराएमा गुम्बा निर्माण गर्ने उनको भनाई छ ।
आफूलाई गुम्बाको आवश्यकता नभए पनि मर्ने बेलामा कुनै राम्रो बस्तिमा गुम्बा निर्माण गर्ने सोचकासाथ भुक देउरालीलाई रोजेको उनले सुनाए । उनले भने ,‘म ७५ वर्षको भएँ ,तिब्बत र भारतमा गुम्बा छन् तर मलाइ कुनै गुरुङ गाउँमा ध्यान गर्न मन लाग्यो र यो गाउँ रोजाइमा परेको छ ।’
स्थानीयको सहयोग मिलेमा गुम्बा निर्माण छिट्टै सुरु गर्ने उनले बताए । गुम्बामा २५ फिटको बुद्धको मुर्ति राखिनेछ । गुम्बा बनेपछि त्यसको संरक्षण गर्नु स्थानीयको कर्तव्य हुने उनको भनाई थियो । उनले स्थानीय लामा गुरुको सहयोगमा भुक गाउँमा बौद्ध धर्म अनुसार पूजापाठ समेत गरेको स्थानीय पुर्ण गुरुङले जानकारी दिए । आचार्य लामा कर्मा मोलम सङ्बो दुर्गा गुरुङ ,आचार्य लामा कर्मा हिसे पलबर गुरुङ ,आचार्य लामा कर्मा ल्छुङरिक निरोज गुरुङ ,आचार्य लामा कर्मा प्रेमकाजी गुरुङ लगायतका स्थानीय लामाहरु पूजापाठमा सहभागी भएका थिए ।
पर्यटकीय नमुना भुक देउरालीमा गुम्बा बनेमा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य समेत बन्न ेभन्दै स्थानीय हर्षित बनेका छन । बौद्ध धर्मलम्बी र गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको गाउँ भएकोले गुम्बा निर्माणको लागि सबै एक जुट बनेर सहयोग गर्ने स्थानीय पूर्ण गुरुङले बताए । १० ÷१२ पुस्ता देखि लामाका सन्तान बस्दै आएको गाउँमा गुम्बा निर्माण गर्न औतारी लामा गाउँमै आएपछि खुसी लागेको स्थानीय गुप्तमान गुरुङले बताए । सकेसम्म सार्वजनिक जग्गा ब्यबस्थापन गर्ने , नभएमा स्थानीयहरु मिलेर जग्गा दिने क्याप्टेन रामबहादुर गुरुङले बताए ।